C နဲ့ရေးထားသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို Install ဖိုင်ပြောင်းခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
C နဲ့ရေးထားသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို Install ဖိုင်ပြောင်းခြင်း
C နဲ့ရေးထားသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို Install ဖိုင်ေ
ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့ရေ သိရင် ကူညီပေးကြပါအုံးနော်
ကျနော်က Borland C++ စတင်လေ့လာနေတဲ့လူပါ
ကျနော် C နဲ့ဗျာ ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခု ရေးလိုက်တရ် ထားပါတော့
ဥပမာ ကာကူလိပ်တာလို့ စော့လ်ဝဲလေးကို C နဲ့ ရေးလိုက်တရ်
ဆေ့လိုက်တဲ့ အခါ ထွက်လာတဲ့ ဖိုင်လေးကို ကျနော်က သူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်ကိုပေးချင်တရ် အဲ့သူငယ်ချင်းစက်က C မ run ထားဘူး
ဒီတော့ ဖွင့်မရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါကို ကျနော်က စက်တိုင်းမှာဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်ချင်တရ်။
ဥပမာ install ဖိုင်လေးအဖြစ်ပြောင်းချင်တရ် ရနိုင်မလား
Borland C မှာတင် တစ်ခါတည်းသုံးလို့ရလား ဒါမှမဟုတ် တခြား ဘာစော့လ်ဝဲလေးသုံးပြီတော့
Install ဖိုင် run ဖိုင်ပြောင်းပေးနိုင်ပါသေးလဲ ခင်ဗျ။ အားလုံးသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ကူညီပေးပါအုံးနော်။
23-02-2010, 12:52 PM
ပြန်စာ - C နဲ့ရေးထားသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို Insta
Originally Posted by Tayzakoko
ကိုTayzakoko က Borland C++ Builder ကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် Simple Button Test program လေး တင်ပေးလိုက်ပါမယ်...လိုချင်တာ ဟုတ်မဟုတ် အရင်ဖွင့်ပြီး RUN ကြည့်ပါဦးဗျာ...ဘာ Software မှမလိုပါဘူးခင်ဗျာ...
ဒီမှာဒေါင်းပါ...... လိုချင်တဲ့ ပုံစံ ဟုတ်မဟုတ်...ကိုTayzakoko စက်မှာရော Run လို့ရမရ ကြည့်ပါဦးဗျာ..
C program နဲ့ရေးထားသော .exe ဖိုင်ကို setup ဖိုင် ထုတ်ချင&#
ကျနော် Borland6C++ စော့လ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး program လေးတွေ ရေးဖြစ်ပါတရ်။
ရလာတဲ့ run ဖိုင် .exe ဖိုင်ကိုပေါ့ဗျာ။ ကျနော်က Borland6C++ စော့လ်ဝဲ မရမ်းထားတဲ့
တခြားစက်မှာလဲ သုံးချင်တရ်။ ကျနော်လိုချင်တာက လက်ရှိ softwore တစ်ခုကို သုံးသလို setup ဖိုင်လေးကို run ပြီးမှ သုံးလို့ရတဲ့ ပုံစံလေးလုပ်ချင်တရ်။ ကျနော်တို့ C++ နဲ့ရေးထားတဲ့ .exe ဖိုင်ကိုပေါ့။ အဲ့ဒီလို setup ဖိုင် လုပ်နည်းလေးကို
ပြောပြပေးကြပါအုံး။ မြန်မာလိုလေးဆို ပို အဆင်ပြေမှာပါ။ အားလုံး ပျော်ရွှင် ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေဗျာ။
ပြန်စာ - C program နဲ့ရေးထားသော .exe ဖိုင်ကို setup ဖိုင် ထ
ကိုတေဇကိုကို လိုချင်တာ က အောက်ပါ ပုံစံလေးဟုတ်၊ မဟုတ် ဆိုတာ....ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ....ကျွန်တော် exe ထုတ်ထားတဲ့ MP3 လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ဟုတ်တယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ပို့စ်တင်ပေးပါမယ် ခင်ဗျာ
ဟုတ်ပါ့ မှန်ပါ့ အဲ့ဒီလိုလေး လိုချင်တာ ..(ကိုတေဇာ ကိုယ်စား အရင်ဝင်ပြောလိုက်တာ ) အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း အကို အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပြောပြပေးပါ ဥိး ... အားကိုစွာမျှော်လင့်စောင့်စားနေလျှက် .. ဟိဟိ .. အော်ကျွန်တော်သုံးတာက Visual studio 2005 ပါ အကို ..အခုမှ အသစ်အသစ်လေးမို သေချာလေးရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ် ... ကျေးဇူး အကို
Last edited by sAnDViper; 04-06-2010 at 08:22 PM..
ဟုတ်ပါတရ် ကိုမိုးလွင် အစ်ကို အခုတင်ပေးထားတဲ့ ပုံစံလေးလိုပါပဲ .exe ကိုထုတ်ပြီး C မရမ်းထားတဲ့ စက်တိုင်းမှာလဲ သုံးချင်တာပါ။
နောက်တစ်ခု ကျနော် ဆိုလိုတာက run ဖိုင်ပုံစံလေ။ စော့လ်ဝဲတစ်ခုကိုသုံးတော့မရ်ဆို setup ဖိုင်လေးကို run ပြီးမှ သုံးလို့ရတာကိုပြောတာလေးကိုပြောတာပါ။ အဲ့ဒီလို ကိုရေးထားတဲ့ စော့လ်ဝဲလေးကို အခု အစ်ကို ပေးထားတဲ့ mp3 လေးလို ဒဘယ်ကလစ် နိုပ်ယုံနဲ့ သုံးလို့ရတာမဟုတ်ပဲ setup ဖိုင်လေး run ပြီးမှ သုံးလို့ရတဲ့ စော့လ်ဝဲလေးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာပါ။
အခု အစ်ကို .exe ဖိုင်ထုတ်ထားတဲ့ ပုံစံလေးကိုပဲ ပြောပြပေးပါအုံးနော်။ အစ်ကို ဆီမှာ C++ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိရင်လဲ
ကျနော်ကို သင်ပြပေးပါအုံး။ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေဗျာ။
ကိုမိုးလွင်ရေရရ ... မအားတော့ဘူးလား မသိဘူးနော်.. အကိုပြောပြမယ့် အချိန်ကို ၀ိတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ .. ကျေးဇူးပြုပြိးတော့ ဖြေပေးစေချင်ပါတယ် ...
တည်နေရာ: ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တနေ&
ပို့စ် 23 ခုအတွက် 81 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုတေဇကိုကို လိုချင်တဲ့ဆော့ဝဲမျိုး ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိပါတရ်...Smart Installer ပါ...
အောက်က လင့်မှာတင်ပေးထားပါတရ်....Key gen နဲ့ ပါ....အဆင်ပြေနိုင်ပါစေ ကိုတေကြီး... :P
Life is an opportunity, benefit from it.:1::1::1:
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ openeyes အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit openeyes's homepage!
အကို openeyes ရေ ...ကျွန်တော် ရန်းလိုက်တာ အဲ့လိုအဲယာလေးပေၞလာတယ် အဲ့ဒါ ဘာဆက်လုပ်ရမလည်း အကို .. ၀င်းဒိုး ၇ ပါ သုံးနေတာက ..
Sorry ပါ ခင်ဗျာ...ကျွန်တော်လဲ အခု ၁ ရက် ၂ ရက် အဆောင်မှာ မရှိလို့ ပြန်မရေးဖြစ်တာပါဗျာ..
ကိုTayzakoko ပြောသလိုတော့ Setup ဖိုင်းလေးနဲ့တော့ ကျွန်တော်လဲ မလုပ်ဖူးဘူးဗျ...ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ C++ Builder လေးနဲ့ လုပ်တာကိုဘဲ ပြောပြပါရစေ...Exe ထုတ်ရောင်းစားတဲ့ သူတွေ အတွက်ပေါ့...
ဥပမာ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ရေးထားတဲ့ Program ကို Build လုပ်မယ်...Run လုပ်မယ်..အဲ့ဒီ အဆင့် (၂)လုပ်ပြီးရင်တော့ အောက်ပါ အချက် (၂) ကို ဆောင်ရွက်လိုက်ရုံနဲ့ လိုချင်သော exe ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာ...
၁) Project->Option->Linker->Linking and uncheck the choice "Dynamic RTL " and after...
၂) Project->Packages-> and uncheck the choice "Build with runtime packages "
We can run it to any computer, works fine
၂၀၀၅ မှာတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရလည်း မပြောပြဘူး တော်ပြီ လာလည်ရင် ဘီယာမတိုက်တော့ဘူး .. ဟိဟိ .... စတာ .. ကျွန်တော် ၂၀၀၅ အတွက်လေးလည်း ပြောပြပေးပါဥိး ရှာတာမတွေ့လို့ ..
အခုလို ကူညီပေးတဲ့ အတွက်ပါ။ အစ်ကို အားရင်လဲ အစ်ကို c လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ ညီငယ်တို့ကို မျှဝေပေးပါအုံးနော်။
ကျနော်လဲ အခုမှ လေ့လာဆဲဆိုတော့ မြန်မာလိုလေး ရှင်းပြနိုင်မရ် ညီအစ်ကိုတွေရှိတော့ အားတတ်တာပေါ့ဗျာ။ အတတ်မြန်မရ်လဲထင်တရ်လေ။ ကျနော် ဆိုဒ်က် တစ်ခုရေးထားသေးတရ်ဗျာ။ အစ်ကို အဆင်ပြေရင် အဲ့ထဲမှာလဲ ၀င်ရေးပေးပါအုံး။
http://shwegyinthar.totalh.comလေးပါ။ အားလုံးသော ညီအစ်ကို မောင်နှမများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Window အသစ်မှာ Application တွေကို Auto Install လုပ်သွားစေမယ် maJunior Software များဆိုင်ရာ 17 15-01-2014 08:36 AM
Xp Repair Install myatko296@gmail.com Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော005-11-2008 09:17 PM